Izindaba - Eminye imibono yokwakheka kwe-nail powder okulula ukuzama
Eminye imibono yokwakheka kwe-nail powder okulula ukukuzama
Izipikili ze-dip powder sezibe enye yezindlela ezithandwa kakhulu ukwenziwa kukamuthi muva nje. Inqubo ye-dip powder isebenzisa imikhiqizo eminingana ukwenza izinzipho ezinhle, ezifashisayo zisebenziseke ngokwengeziwe. Kukhona ukubukeka okuhlukile nemiklamo ongayakha usebenzisa i-dip powder powder. Funda imibono elula yokugoba impuphu yokuzama ukuzama ngezansi.
IDIPHA AMAPIPILI AMACEBISO AMA-NAIL DRill
Lokhu kuhle kulabo abangathandi ukukhulisa izinzipho zabo isikhathi eside noma abanomkhuba wokuhlafuna izipikili zabo zemvelo phansi. Ungagcina inkohliso yezipikili ezinde ezinesitayela ngokusebenzisa i-dip powder enezandiso zezipikili. Ungakwazi ukunamathela kumathiphu wokunwebeka kwezinzipho uma usubumbile futhi wabhoboza izinzipho zemvelo. Faka futhi ushaye ithiphu ukuze uyihlanganise nesipikili sakho semvelo, engeza amajazi ambalwa we-powder ecacile, bese ungaqhubeka nenqubo ejwayelekile yempuphu yokucwilisa.
Izipikili ZESIJENSI ZESIFRENCH
Ukubukeka kulula ukudala kepha kuhlala kukuhle. Konke okudingayo kulokhu kubukeka kuyisisekelo esiphaphathekile esiphinki kanye nophawuda omhlophe. Cwilisa isipikili sakho sonke kusisekelo esibomvana, ukuze uthole ukumbozwa okugcwele ebusweni bezinzipho. Ngemuva kwalokhu, ungamane ucwilise ichopho lesipikili sakho kufulawa. Ungakwazi ngisho nokulungisa ukwakheka kolayini ngokushintsha i-engeli ofaka kuyo isipikili sakho. Ukuthola umugqa wokumamatheka ophelele, oyindilinga, siphakamisa ukuthi sifake isipikili ku-43 degree angle.
IZIPHUMELELO ZE-GLITTER DIP
Cabanga ukudala ukubukeka kobusika nge-glitter emhlophe, noma ulungele iphathi lonyaka omusha nge-glitter yegolide. Kunezinhlobo eziningi ze-glitter dip powders ezikuvumela ukuthi udale izitayela ezahlukahlukene. Ungathola i-glitter powders ngesiliva, ithusi, imifino, okubomvu, okuphuzi nama-purples. Khumbula ukuthi i-glitter ejwayelekile yezipikili zinomkhuba wokungalali ngokulinganayo.
Inkampani yakwaYaqin inikeza ngemikhiqizo yempuphu ediphikisiwe yobungcweti. Lapha, ungathola okufunayo njenge-bond ebalulekile, i-base, i-sealer, uwoyela onomsoco, namanye ama-powders ombala wesiginesha ophezulu.